Saturday June 02, 2018 - 13:19:13 in Wararka by Super Admin
Mid kamida warbaahinta dalka faransiiska ee caanka ku ah ijaafeynta muqadasaadka muslimiinta ayaa markale weerar ku qaaday jaaliyadda muslimiinta ee faransiiska looga tirada badanyahay.
Majallada afka dheer ee lagu magacaabo Charlie Hebdo ayaa soo daabacday sawir ay ku xumeynayso gabar muslimad muxajabad ah oo caan ka ah gudaha faransiiska.
Wargeyskan caanka ku ah cadaawadda uu uqabo muslimiinta ayaa aflagaadeeyay gabadha lagu magacaabo Mariam Bujito oo madax ka ah ururka midowga ardayda jaamacadda sarboon ee wadanka faransiiska.
sawirka gabdha muslimadda ah oo lafool xumeeyay laguna dul qoray erayo cunsuriyadeed ayuu wargeyska Charlie Hebdo faafiyay.
Wargeyskan ayaa gabdha muslimadda ah ku tilmaamay mid aan caqli laheyn iyagoo ku ceebeynayay xijaabka iyo dhowrsanaanta ay horseedka ugu tahay hablaha muslimaadka faransiiska.
Mariam Bujito oo warbaahinta lahadashay ayaa sheegtay in ay aad uga xumaatay markii ay warbaahinta ka aragtay muuqaalkeeda oo lafool xumeeyay waxayna ballanqaaday in weerarka ijaafeynta ah ee lagu qaaday uusan niyad jebinayn oo ay sii ahaan doonto muxajabad.
Wasaaradda arrimaha gudaha faransiiska waxay sheegtay in sawirka loo ekeysiiyay daanyeer ee maryama lagu sheegay ay baarayaan iyadoo aan wax tallaab ah ka qaadin tifaftirayaasha Wargeyska taas oo muujinaysa in gaaladu umideysanyihiin dagaalka ay kula jiraan muslimiinta.
Sanadii 2015 mujaahidiinta alqaacidda ee jaziiradda carabta ayaa weerar dhiig badan ku daatay ku qaadday xarunta wargeyska shaarla iibdo ee magaalada Paris kadib markii wargeyskan uu aflagaadeeyay nabigeena maqaamka sare leh ee Muxamed SCW.